Sɛ Obi Bɛyɛ Osuani a, Adɛn Nti na Ɛnsɛ sɛ Ɔtoto no Ase? | Yesu Asetena
KENKAN WƆ Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nyungwe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
Sɛ Obi Bɛyɛ Osuani a, Adɛn Nti na Ɛnsɛ sɛ Ɔtoto no Ase?
NEA ƐHIA NA OBI ATUMI AYƐ OSUANI
Bere a Yesu wɔ Farisini panin no fie no, ɔkyerɛɛ nkurɔfo nneɛma bi a mfaso wɔ so. Afei ɔsii kwan so de n’ani kyerɛɛ Yerusalem; ɔrekɔ no, nnipa pii dii n’akyi ne no kɔe. Dɛn paa na ɛmaa wɔdii n’akyi? Ná wɔayɛ wɔn adwene sɛ nea ɛte biara wɔne no bɛnante anaa?
Wɔnam kwan so rekɔ no, Yesu kaa asɛm bi kyerɛɛ wɔn, na ɛbɛyɛ sɛ wɔn mu bi ho dwirii wɔn. Ɔkaa sɛ: “Sɛ obi ba me nkyɛn na ɔntan ne papa ne ne maame ne ne yere ne ne mma ne ne nua mmarima ne ne nua mmaa ne ɔno ara mpo ne kra a, ɔrentumi nyɛ me suani.” (Luka 14:26) Yesu asɛm yi kyerɛ sɛn?
Ɛnkyerɛ sɛ, sɛ obi nya bɛyɛ Yesu suani a, ɔne n’abusuafo to nkwanta a wɔapae. Mmom nea ɛkyerɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ obiara a ɔbɛyɛ ne suani no dɔ ɔno Yesu sen n’abusuafo. Ɛnsɛ sɛ onii no yɛ n’ade te sɛ ɔbarima bi a ɔkaa ne ho asɛm wɔ mfatoho no mu no; nea enti a wankɔ apontow a ɛho hia no ne sɛ ɔwaree nkyɛe.—Luka 14:20.
Kae sɛ Yesu kaa sɛ ɛsɛ sɛ osuani biara tan “ɔno ara mpo ne kra” anaa ne nkwa. Wei kyerɛ sɛ obiara a ɔyɛ Yesu suani amapa no, ɛsɛ sɛ ɔdɔ Yesu sen ɔno ara ne nkwa. Ɛno kyerɛ sɛ ɛba owuo mpo a, ɔbɛwu ama no. Asɛm yi ma yɛhu sɛ, sɛ obi ka sɛ ɔyɛ Kristo suani a, ɛnyɛ agorɔ. Ɔrentumi nyɛ no biara biara, efisɛ ɛyɛ aniberesɛm.
Sɛ obi bɛyɛ osuani a, ahokyere ne ɔtan wom. Yesu kaa sɛ: “Obiara a ɔnsoa n’asɛndua na ɔnni m’akyi no ntumi nyɛ me suani.” (Luka 14:27) Enti sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ Yesu suani papa a, ɛsɛ sɛ ɔhwɛ kwan sɛ animguase a Yesu faa mu no, ɔno nso bɛfa mu bi. Yesu kaa mpo sɛ n’atamfo bɛkum no.
Enti nnipa a wɔdi Yesu akyi no, na ɛsɛ sɛ wɔdwene ho kɔ akyiri paa hu sɛ Kristo suani a obi bɛyɛ no nyɛ agodie. Yesu yɛɛ mfatoho bi de sii asɛm no so dua. Ɔkaa sɛ: “Mo mu hwan na ɔpɛ sɛ ɔsi aban na ɔnni kan ntena ase nsẽsẽ nhwɛ sɛ ɔwɔ deɛ ɛdɔɔso a ɔde bɛwie? Anyɛ saa a, ɔbɛto fapem no nanso ɔrentumi nwie.” (Luka 14:28, 29) Nea asɛm yi kyerɛ ne sɛ wɔn a wɔne Yesu nam kwan so rekɔ Yerusalem no, na ɛsɛ sɛ wɔtumi si wɔn adwene pi sɛ, wɔnya bɛyɛ Yesu asuafo a, biribiara a ɛbata ho biara nso wɔbɛsɔ mu. Ɔmaa mfatoho foforo de sii asɛm no so sɛ:
“Ɔhene bɛn na sɛ ɔresim akɔhyia ɔhene foforɔ wɔ ɛko mu a, ɔnni kan ntena ase ntu agyina nhwɛ sɛ ɔbɛtumi de asraafoɔ mpem du akɔhyia deɛ ɔde mpem aduonu reba ne soɔ no? Nokorɛm no, sɛ ɔrentumi nyɛ saa a, ɛnneɛ berɛ a baako no wɔ akyirikyiri nohoa no, ɔsoma ahemmɔfoɔ ma wɔkɔsrɛ sɛ wɔnni no asomdwoeɛ mu.” Afei Yesu kyerɛɛ mu sɛ: “Enti, monhunu sɛ, mo mu biara a ɔnnya n’ahodeɛ nyinaa hɔ no rentumi nyɛ me suani.”—Luka 14:31-33.
Yesu anka saa asɛm no amma nnipa a wɔne no nam kwan so no nko ara. Mmom na ɔpɛ sɛ obiara a ɔbɛdi Kristo akyi no de hyɛ n’adwene mu sɛ ɔde nea Kristo aka no bɛyɛ adwuma. Wei kyerɛ sɛ, obiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ Yesu suani no, ɛto nea ɛyɛ den a, ɛsɛ sɛ ɔde ne biribiara bɔ afɔre; ne nkwa mpo, ɛsɛ sɛ ɔtumi de twa so. Obi bɛtumi ayɛ saa a, ɛhia sɛ ɔde kɔ adwendwene mu, na ɔbɔ ho mpae.
Afei Yesu kɔfaa asɛm bi a waka dada wɔ ne Bepɔ so Asɛnka no mu bae. Saa bere no, ɔkaa sɛ n’asuafo no yɛ “asase so nkyene.” (Mateo 5:13) Ebia nea na ɔrepɛ akyerɛ ne sɛ, sɛnea yɛtumi de nkyene hyɛ biribi ma ɛkyɛ no, n’asuafo no tumi boa nkurɔfo ma wɔsom Onyankopɔn bɔ bra pa. Nanso ɔresan aka ho asɛm yi deɛ, ɔkaa sɛ: “Ɛyɛ nokorɛ sɛ nkyene yɛ. Nanso sɛ nkyene ahoɔden firi mu a, ɛdeɛn na wɔde bɛhyɛ nkyene no?” (Luka 14:34) Ná n’atiefo no nim sɛ nkyene bi wɔ hɔ a, dɔte frafra mu, enti wɔde yɛ hwee a ɛnyɛ yie.
Seesei a ɔde ne som adwuma reba awiei no, na ɔpɛ sɛ wɔn a wɔayɛ n’asuafo akyɛ no mpo hwɛ yie na wɔangogo wɔn ho. Anyɛ saa a, wɔbɛyɛ sɛ nkyene a n’ahoɔden afiri mu; wɔde wɔn yɛ hwee a, ɛrenyɛ yie, na wiase no bɛsere wɔn. Nea ɛnyɛ wɔ asɛm no koraa ne sɛ, wɔremfata wɔ Onyankopɔn anim, na wɔde ahohorabɔ mpo bɛba ne din so. Enti Yesu sii so dua sɛ ɛho hia paa sɛ wɔda wɔn ho so na biribi saa anto wɔn. Ɔkaa sɛ: “Ma deɛ ɔwɔ asõ a ɔde bɛtie no ntie.”—Luka 14:35.
Yesu kaa sɛ ɛsɛ sɛ osuani ‘tan’ n’abusuafo na ɔtan ‘ɔno ara ne kra’ mpo. Saa asɛm no kyerɛ sɛn?
Yesu maa mfatoho mmienu bi; baako fa obi a ɔpɛ sɛ ɔsi aban ho, ɛnna baako nso fa ɔhene bi ne n’asraafo ho. Mfatoho no kyerɛ sɛn?
Nkyene a Yesu kɔfa baa n’asɛm mu no, dɛn na na ɔrepɛ akyerɛ?
Abusuafo a Wonnye Nni—Wobɛyɛ Dɛn Aka Wɔn Koma?